Asum GIS Geographic Information System (GIS)
Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị ka ụzọ mmalite Open Source siri jisie ike ịkwado onwe ha n'ụzọ kwụsiri ike ma nye ohere azụmaahịa maka ndị tụkwasịrị uru itinye aka; mgbe ikwe ka nraranye nye isi nke azụmaahịa maara na ndị ọkachamara ndị ọzọ ga-ekpuchi ihe ndị a chọrọ na azụmaahịa ha. N'etiti ụdị ndị a, WordPress kwesịrị ka m nwee mmasị, ...
Ozi niile site na QGIS
Nke a bụ nyocha nyocha nke akụkọ niile mere na QGIS. N'oge a emelitere ka mbipute 2.18. QGIS bụ otu n'ime ihe kachasị na-emepe emepe na-emepe emepe, na-enwe ike ịsọmpi na ngwanrọ na-adịgide adịgide. [isiokwu ọzọ = "QGIS 2.18 Las Palmas"] Akụkọ ...
Usoro QGIS kasị mma na Spanish
Inweta usoro QGIS bụ n'ezie ebumnuche nke ọtụtụ maka afọ a. N'ime mmemme mmemme mmeghe, QGIS abụrụla azịza kachasị mkpa, ụlọ ọrụ nkeonwe na ndị otu gọọmentị. Yabụ, ọbụlagodi na ị maara ArcGIS ma ọ bụ ngwa ọrụ ọzọ, tinye na mpempe akwụkwọ ọrụ gị ...
Akụziri CAD / GIS, qgis
3 27 si 2.18 QGIS mgbanwe
Mgbe anyị chọrọ ịkwụsị ndụ QGIS na nsụgharị 2.x, na-eche ihe ga-abụ QGIS 3.0, peeji a na-egosi anyị ihe QGIS 2.18.11 'Las Palmas' gụnyere, nke e mere na July nke afọ a. Ugbu a QGIS nwere ihe nloghachi di nma banyere ndi nkwado ohuru, ulo oru ndi ...
Ọtụtụ n'ime anyị na-eche, sị: Olee mgbe a ga-ahapụ QGIS 3.0? N'afọ gara aga (2015) ndị otu ọrụ malitere nyocha oge na otu esi ahapụ QGIS 3.0. Ha kwere nkwa, dị ka akwụkwọ akụkọ Anita Graser dere, na ha ga-ekwupụta atụmatụ ha nke ọma na ndị ọrụ na ndị mmepe tupu ...
Ikpe ahụ: Enwere m ngwugwu nke obodo, yana isi ihe dị mkpa na cadastral n'ụdị a: Ngalaba, Obodo, mpaghara, ihe onwunwe. nke mere na enwere nomenclature dika onyonyo na-egosi: Ihe omuma atu: 0313-0508-00059 Mkpa Ọnọdụ a bụ na enwere m mmasị na m nwere ike ịkọwapụta atụmatụ ndị ahụ dabere na agbụ nke abụọ, nke bụ ...
Oge ọ bụla anyị nọdụrụ n’ihu ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ chọrọ ịmejuputa usoro ikpo okwu na njikwa njikwa mpaghara, nke na-anụkarị ọtụtụ olu na-adịghị mma gbasara ụdị OpenSource, ajụjụ a na-ebilite na obere mgbanwe. Kedu onye na-akwado QGIS? Ọ dị anyị ka ndị na-arụ ọrụ na ndị nkịtị, na onye na-eme mkpebi na-achọ ịkwado ...